Izay afaka aho ny hihaona sy hiresaka amin’ny Azia ry zalahy an-tserasera ho maimaim-poana raha izaho no tsy Aziatika zazavavy. Video Mampiaraka
Raha toa ianao ok amin’ny fivoriana any Azia ry zalahy izay tena miaina ao Asia, dia afaka mody fa ianao mianatra ny Sinoa, Japoney, koreana, ny Vietnamiana, na hafa any Azia Atsinanana ny fiteny. Na inona na inona ireo fiteny misy fomba mihoatra tompon’ny teny amin’ny fianarana ny teny anglisy noho misy mpiteny anglisy fianarana ireo teny ireo, ka efa nahazo lalana kokoa ny fangatahana ho an’ny olona tahaka anao noho misy famatsiana (mihevitra ho manana ho ianao mahafehy tsara ny teny anglisy).
Tsy dia mila miresaka amin’ny hafa ny teny tsara. Ny ankamaroan’ny malagasy mpiteny ny fianarana fiteny hafa dia mahatsiravina, ka na inona na inona no ratsy ny Shinoa na Japoney na koreana dia, dia tsy ho toa izay ratsy raha oharina amin’ny olon-drehetra. Afaka manome toky anareo aho fa farafahakeliny ny iray ampahatelon’ny ny olona mampiasa teny fifanakalozana toerana no manana farafahakeliny ny ampahany kely ny ati-doha izay ao amin’ny mangingina mitady sipa’ ny vehivavy sakaizany (raha ny fikasana).
Tahaka ny olon-kafa, hoy ny WeChat ihany koa dia tena tsara
Efa maro ny endri-javatra ho an’ny mifampiresaka amin’ny olon-tsy fantatra. Azonao atao mihitsy aza ny hahazo ny lisitry ny olona rehetra an-tserasera ao anatin’ny kilaometatra (izay angamba ny kely mampatahotra). Izany Shinoa fampiharana toy izany koa ny ankamaroany amin’ny vahoaka Shinoa no mampiasa azy. Maro ireo vohikala avy any mahazo mifampikasokasoka amin’ny Azia ry zalahy, fa ny iray aho fampiasana Hey-ai izay Aziatika ry zalahy sy ny tsy Aziatika zazavavy any amin’ny chat. Ny toerana dia t mitady ny tsara indrindra, fa izany dia maimaim-POANA, ka dia miampy. Raha vao mahazo mampiasa ny toerana sy ny fomba ny zavatra mandeha eo aminy, dia ho hitanao fa misy be dia be ny mpampiasa manerana izao tontolo izao izay mampiasa izany mba hihaona ny mifanitsy. handinika izay vondrona ireo dia mety ho tena liana amin’ny resaka sy ny mampiaraka ianao mifototra amin’ny zavatra sarobidy, ary inona no tsy maintsy manolotra. Ireo vondrona ireo dia samy hafa ny soatoavina na eo aza izany rehetra ho nanoratra ny Aziatika. Misy vidy ny famakiana sy ny tena fampandrosoana be dia be, raha ny hafa kosa fikarakarana bebe kokoa momba ny lalao video sy mankafy ny fotoana. Raha toa ianao tena ho tena fampandrosoana ary manana be dia be ny faniriana sy ny fiara, vondrona sasany, toy ny toastmasters na ny sekoly dia manao tsaratsara kokoa ho anao. Fa raha ianao kokoa ny kamo, gamer karazana izay manana ny lalao, na dia tsara amin’ny haiady, mandehana any
← Shinoa Mampiaraka amin'ny Chat miaraka amin'ny tokan-tena amin'ny Tena Sinoa
An-tserasera i Shina amin'ny Chat: maimaim-poana Shina Vahiny webcam Chat Room →